Ngwarira Zvinovavarirwa Nemwoyo | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri rinoti: “Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose uye wakaipa kwazvo.” (Jer. 17:9) Mwoyo wedu paunonyanya kuda chimwe chinhu, tinotsvaka zvikonzero zvokuti tichiite.
Magwaro anotiyambira kuti: “Mumwoyo munobuda kufunga kwakaipa, umhondi, upombwe, ufeve, umbavha, uchapupu hwenhema, kumhura.” (Mat. 15:19) Mwoyo wedu wokufananidzira unogona kutinyengera kuti tiite zvinhu zvisingaenderani nezvinodiwa naMwari. Uye tingatozoyeuka bako tanayiwa. Chii chingatibatsira kuziva zvinovavarirwa nemwoyo wedu tisati taita zvakaipa?
UNGAZIVA SEI ZVAUNOVAVARIRA?
Kuverenga Bhaibheri zuva rega rega kunobatsira sei mwoyo wedu?
Verenga Bhaibheri zuva rega rega wofungisisa zvarinotaura.
“Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rakapinza kupfuura bakatwa chero ripi zvaro rinocheka nekwose uye rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nomudzimu,” akanyora kudaro muapostora Pauro. Zvinotaurwa naMwari muBhaibheri zvinokwanisa “kunzwisisa kufunga nevavariro zvomwoyo.” (VaH. 4:12) Kuzviongorora tichishandisa zvinotaura Magwaro kunogona kutibatsira chaizvo kuona zvinovavarirwa nemwoyo. Zvinokosha chaizvo kuverenga Shoko raMwari zuva rega rega tichifungisisa zvarinotaura. Izvi zvinoita kuti tive nemafungiro uye maonero aJehovha!
Kugamuchira zano reMagwaro uye kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri kuchabatsira hana yedu, iro inzwi riri mukati ‘rinopupurirana’ nesu. (VaR. 9:1) Hana yedu inogona kutirambidza kupa tuzvikonzero twokuita zvakaipa. Uyewo Bhaibheri rinotaura zvakaitwa nevamwe zvinogona ‘kutinyevera.’ (1 VaK. 10:11) Kudzidza pazvinhu izvozvo kunogona kutibatsira kuti tisatanga kufamba nenzira yakaipa. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuitei?
Minyengetero yedu inotibatsira kuziva zvatiri nechomukati
Nyengetera kuna Mwari kuti akubatsire kuziva zvinovavarirwa nemwoyo wako.
Jehovha “muongorori womwoyo.” (1 Mak. 29:17) “Mukuru kune mwoyo yedu uye anoziva zvinhu zvose.” (1 Joh. 3:20) Hapana anogona kunyengedza Mwari. Kana tikanyengetera kwaari, tichimuudza nhunha dzedu, manzwiro edu, uye zvatinoda, Jehovha anogona kutibatsira kuziva zvinovavarirwa nemwoyo wedu. Tinogona kutomukumbira kuti ‘asike mwoyo wakachena matiri.’ (Pis. 51:10) Saka munyengetero unokosha chaizvo kana tichida kuziva zvinovavarirwa nemwoyo wedu.
Misangano yechiKristu inotibatsira kuziva zvinovavarirwa nemwoyo wedu
Teerera pamisangano yechiKristu.
Kuteerera kwatinoita pamisangano yechiKristu kunogona kutibatsira kunyatsoongorora zvakaita mwoyo wedu. Kunyange zvazvo tingasadzidza chimwe chinhu chitsva pamusangano wega wega, kungovapo kunotibatsira kuti tinzwisise zviri nani zvinotaurwa neBhaibheri uye tinowana zviyeuchidzo zvinotibatsira kuongorora zvinovavarirwa nemwoyo. Mhinduro dzinopiwa nehama nehanzvadzi dzedu dzinotibatsirawo kugadzirisa unhu hwedu. (Zvir. 27:17) Kana tikava netsika yokusawadzana nevamwe vaKristu pamisangano, izvozvo zvinogona kutikuvadza. Izvozvo zvinogona kuita kuti ‘tizvitsvakire zvatinoda zvoudyire.’ (Zvir. 18:1) Saka tinofanira kuzvibvunza kuti, ‘Ndinogara ndichipinda misangano yose uye ndichibatsirwa nayo here?’—VaH. 10:24, 25.
MWOYO WEDU UCHAITA KUTI TIITEI?
Mwoyo wedu unonyengera unogona kutitsausa pane zvakawanda muupenyu. Ngationgororei zvinhu zvina zvinoti: kuunganidza pfuma, kunwa doro, kusarudza shamwari, uye zvatinoita pakuzvivaraidza.
Takasikwa tiine chido chokugutsa zvinodiwa nemuviri. Zvisinei, Jesu akataura muenzaniso unotinyevera nezvekunyanya kukoshesa pfuma. Mune mumwe mufananidzo, Jesu anotikumbira kuti tifunge nezvemupfumi aiva nematura akazara. Saka ainge asisina pokuisa zvirimwa zvakawanda zvaaizokohwa. Murume wacho aida kuputsa matura ake ovaka akakura. Akafunga mumwoyo make kuti: “Ndichaunganidzira imomo zviyo zvangu zvose nezvinhu zvangu zvose zvakanaka; uye ndichati kumweya wangu: ‘Mweya, une zvinhu zvakanaka zvizhinji zvakachengeterwa makore mazhinji; zorora zvako, udye, unwe, ufare.’” Asi mupfumi iyeyo haana kufunga nezvekuti aigona kufa usiku ihwohwo.—Ruka 12:16-20.
Sezvatinokwegura, tingatanga kunetseka chaizvo nenyaya yokutsvaka mari yokuzoshandisa takwegura zvokuti tingatanga kupa tuzvikonzero twokushanda ovhataimu misi yatinoenda kumisangano kana kuti tingatanga kuregeredza mamwe mabasa edu echiKristu. Hatifaniri kungwarira mafungiro iwayo here? Kana kuti tichiri vaduku uye tinoona kuti hapana rimwe basa rinopfuura renguva yakazara. Tinoverengera here kupayona tichifunga kuti tinofanira kutanga tambounganidza mari? Ino handiyo nguva yokuita zvose zvatinogona kuti tipfume kuna Mwari here? Ndiani anoziva kana tichizenge tiri vapenyu mangwana?
“Usava mumwe wevanonwisa waini,” inodaro Zvirevo 23:20. Kana munhu aine havi yedoro angapa tuzvikonzero twokugara achinwa. Angati anonwira kuti ambozorodza pfungwa, kwete kudhakwa. Kana tichinwira kumbozorodza pfungwa, tinofanira kunyatsoongorora zvinovavarirwa nemwoyo wedu.
Chokwadi hazviiti kuti tirege zvachose kuonana nevasingatendi, kuchikoro, kubasa, kana muushumiri. Asi izvozvo zvakasiyana nokuwadzana navo, kunyange kuita kuti vave shamwari dzedu dzepedyo. Tinopa tuzvikonzero twokuwadzana navo tichitaura kuti vanhu vakanaka chaizvo here? Bhaibheri rinoyambira kuti: “Musatsauswa. Ushamwari hwakaipa hunoshatisa tsika dzinobatsira.” (1 VaK. 15:33) Sezvinongoita tsvina shomanana inogona kushatisa mvura yakachena, kushamwaridzana nevanhu vasingadi Mwari kunogona kutikanganisa pakunamata totanga kutevedzera vanhu venyika pamaitiro, mafungiro, mapfekero uye matauriro.
Zvigadzirwa zvemazuva ano zvinoita kuti tiwane zvinhu zvinovaraidza nyore nyore, uye zvimwe zvacho zvinomutsa mubvunzo uye hazvina kukodzera vaKristu. Pauro akanyora kuti: ‘Zvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ose ngazvirege kumbotaurwa nezvazvo pakati penyu.’ (VaEf. 5:3) Zvakadini kana mwoyo wedu uchifarira kuona kana kuteerera zvinhu zvisina kuchena? Tingafunga kuti munhu wose anoda zvokuzvivaraidza nazvo kana kumbofurwa nemhepo, uye kuti hapana anofanira kuudza mumwe zvokuita panyaya iyi. Asi tinofanira kuteerera zano raPauro torega kuona kana kuteerera zvinhu zvisina kuchena.
Kunyange zvazvo takanyengerwa nemwoyo wedu uye tajairira kupa tuzvikonzero twokuita zvakaipa, tinogona kuchinja. (VaEf. 4:22-24) Funga nezvemienzaniso miviri yemazuva ano.
Miguel * aifanira kuchinja maonero aaiita pfuma. Anoti: “Ini, mudzimai wangu nemwanakomana wedu, tinobva kunyika inokoshesa kuwana zvigadzirwa zvose zvemazuva ano zvakanaka zvinenge zvichangoburwa uye kuva neupenyu hwakanaka. Pane imwe nguva ndakati sika sika nokutsvaga chose chandaikwanisa kuwana munyika, ndichifunga kuti ndaisazobatwa nemusungo wokudisa pfuma. Pasina nguva ndakaona kuti kumhanyisana nokuwana zvinhu kunoramba kuchingoenderera. Ndakanyengetera kuna Jehovha nezvemaonero angu uye zvaivavarirwa nemwoyo wangu. Ndakamuudza kuti ini nemhuri yangu taida kumushumira nguva yakazara. Takasarudza kuita kuti upenyu hwedu husava netwakawandawanda uye takatamira kwaidiwa vaparidzi vakawanda. Pasina nguva takatanga kupayona. Takaona kuti hatidi zvinhu zvakawanda kuti tive neupenyu hwakanaka uye hunofadza.”
Zvakaitika kuna Lee zvinoratidza kuti kunyatsozviongorora kwakamubatsira kuti arege kushamwaridzana nevanhu vakaipa. Lee anoti: ‘Basa rangu raiita kuti ndigare ndichiwadzana nevanhu vokune dzimwe nyika vandaiita navo bhizimisi. Ndaiziva kuti kumisangano iyoyo kwainwiwa chaizvo, asi ndainakidzwa nokuendako. Kakawanda ndaipotsa ndadhakwa, asi ndaizonetseka. Ndaifanira kunyatsoongorora mwoyo wangu. Zano reShoko raMwari uye mazano andakapiwa nevakuru akandibatsira kuona kuti ndaitsvaga kushamwaridzana nevanhu vasingadi Jehovha. Iye zvino ndinoedza kuita bhizimisi rangu ndichishandisa foni uye handichanyanyi kuonana nevanhu ivavo.’
Tinofanira kunyatsozviongorora uye toona zvinovavarirwa nemwoyo wedu. Patinenge tichidaro, tinofanira kunyengetera tichikumbira kubatsirwa naJehovha, tichiyeuka kuti “anoziva zvakavanzika zvomwoyo.” (Pis. 44:21) Mwari akatipawo Shoko rake iro rinogona kushanda segirazi. (Jak. 1:22-25) Tinobatsirwawo nezviyeuchidzo uye mazano zvatinowana mumabhuku echiKristu uye pamisangano! Kana tikashandisa zvinhu izvi tinogona kuchengetedza mwoyo wedu toramba tichifamba munzira yokururama.
^ ndima 18 Mazita akachinjwa.